ကင်ဂျုံအန် နေမကောင်း ဖြစ်နေချိန်၊ အာဏာလုဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူ… ကွပ်မျက်ခံ ရမှာလား ဆိုတာ…? – Let Pan Daily
ကင်ဂျုံအန် နေမကောင်း ဖြစ်နေချိန်၊ အာဏာလုဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူ… ကွပ်မျက်ခံ ရမှာလား ဆိုတာ…?
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်ဟာ အာဏာကို ဆုပ်ကိုင် ထားမှုအပိုင်းမှာ အဖိုးနဲ့ ဖခင်ထက်ကို ပိုတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူက ပညာတတ်တော့ စံနစ်ပိုကျပြီး၊ ရက်စက်စရာရှိရင် ပိုပြီးရက်စက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လူက လူကောင်း၊ ဘယ်လူက လူဆိုးဆိုတဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ခွဲခြားမှုလည်း လုပ်နိုင်တာကြောင့် သူ့ သမိုင်းမှာ သွေးစွန်း ခဲ့တာတွေ မကြာခဏပါ။ မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင်တွေဟာ ထုံးစံအတိုင်း သွေးစွန်းတဲ့သမိုင်းတွေ ရှိခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့် သူတို့ကို ပုန်ကန်တဲ့သူ၊ ပုန်ကန်မယ်လို့ အထင်ရှိရတဲ့သူဆိုရင် ရက်ရက်စက်စက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိ ပါတယ်။ အခုလည်း ညီမဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်ဟာ ရှေ့သွားရှိတဲ့ အတိုင်း သွားရလေမလား စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကင်ယိုဂျောင်ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်ကင် အထူးချစ်ခင်ရတဲ့ ညီမပါ။
သူမဟာ အစ်ကိုတွေ၊ ဖအေတူမအေကွဲ မိသားစု ဝင်တွေ မရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေ၊ ရာထူးတွေကို အစ်ကို ပေးသနားခြင်း ခံခဲ့ရတာကြောင့်၊ ကင်အနေနဲ့ သူ မရှိတဲ့အခါ ညီမကို အရိုက်အရာ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ လျာထားတယ်ဆိုတာ မြင်သာစေမှာပါ။ သို့သော်လည်း ကင်ဂျုံအန်ဟာ ရက်အတန်ကြာ လူမြင်ကွင်း ကနေ ပျောက်ကွယ်ပြီးနောက် သတင်းတွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကင်ယိုဂျောင်က အရိုက်အရာကို လုယူဖွယ်ရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကင်မရှိရင် သူမ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေပါ။ ဒီသတင်းတွေဟာ မြောက်တခွင် မှာလည်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ တာကြောင့် ဒီသတင်းကို ကင်ဂျုံအန်အနေ နဲ့ မသိဘူးမဟုတ်ဘူး … သိကို သိပါလိမ့်မယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကင်ယိုဂျောင်ဟာ အန္တရာယ်စက်ကွင်းထဲမှာ ရောက်နေပြီလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
အချက်အလက်တွေအရ ကင်ဂျုံအန် ဟာ သူ အာဏာရတဲ့ ပထမသက်တမ်း (၅)နှစ် အတွင်းမှာ လူပေါင်း (၃၄၀)ကို ကွပ်မျက် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ (၁၂၀)က တကယ့် ရာထူးကြီးတွေ ယူထားသူတွေပါ။ ဒီအထဲမှာ ဦးလေးဖြစ်တဲ့ ဂျန်ဆောင်သက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ ရာထူး အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ မြောက်ကိုရီးယားအရေး ကျွမ်းကျင်သူ၊ ယမန်နှစ်က ‘My Favourite Dictators’ အမည်ရစာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ Chris Mikul ကတော့ ကင်ဟာ အခုနောက်ပိုင်း သူရဲ့အာဏာနယ်ပယ်ကို အရှိန်မြင့်စွာ ပိုမိုချဲ့ထွင်နေပြီး၊ ပိုမိုကြမ်း တမ်းတဲ့ ဖြုတ်ထုတ်ရှင်း စနစ်ကို ကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကင်ယိုဂျောင် လည်း ပါကောင်း ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကင်ယိုဂျောင်ဟာ တခြားသူတွေထက် ပညာပိုတတ်၊ ပါးနပ်သူမို့ ဒီအန္တရာယ်ကနေ ကင်းလွတ်ကောင်း ကင်းလွတ်နေနိုင် ပါတယ်။
ထိုင်ခုံမှာသာ ထိုင်ပြီး ကရမယ့် အပြင် social distancing ပုံစံ နှင့် နိုက်ကလပ် ပြန်ဖွင့် ခဲ့တဲ့ (ရုပ်သံ)